News | Prakanda
News | Tag: Prakanda
जिम्मेवारीमा फर्काइए प्रकाण्ड, मध्यकमाण्ड हाँक्ने अभिभारा
काठमाडौँ । प्रतिबन्धित नेकपामा जिम्मेवारीविहीन बनाइएका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई नयाँ जिम्मेवारीसहित पार्टीमा सक्रिय बनाइएको छ । नेकपामा प्रकाण्डलाई मध्यकमाण्ड इन्चार्जको नयाँ जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । उक्त जिम्मेवारीमा यसअघि हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ थिए । सुदर्शन अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी चैत पहिलो साता काभ्रेबाट पक्राउ परेका थिए ।
बहिर्गमनको मूडमा प्रकाण्ड ?
काठमाडौँ । नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दसँग सम्बन्ध नसुध्रिएमा पार्टीबाट बर्हिगमन हुने मूमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ रहेको खबर बाहिरिएको छ ।
प्रकाण्डका छोरा गोलीसहित पक्राउ
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेत्रृत्वको नेकपाका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को छोरा नरेन्द्र गोलीसहित पक्राउ परेका छन् । नरेन्द्र विश्वकर्मा विराटनगर विमानस्थल हुँदै यती एयरलायन्सको जहाजबाट बिहीबार साँझ ५ः५५ को फ्लाइटबाट काठमाडौं आउने तयारीमा थिए । विमानस्थलमा हुने चेकजाँचका क्रममा उनीसँग गोली भेटिएपछि पक्राउ परेका हुन् ।
प्रकाण्ड भन्छन् : स्थानीय सरकारसँग क्रान्तिकारी कर उठाउँछाै
कालिकोट । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्कर्मा ‘प्रकाण्ड’ले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग क्रान्तिकारी कर उठाउने उद्घोष गरेका छन् । बुधबार कालिकोटमा भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता प्रकाण्डले भ्रष्टाचारीमा परिणत भएका जनप्रतिनिधिसँग जनसरकार बनाएर क्रान्तिकारी कर असुल गर्ने दाबी गरेका हुन् ।
बिप्लवले किन पठाए विदेशमा करोडौं रुपैयाँ ? प्रकाण्डको डायरीमा यस्तो भेटियो
काठमाडौं । जसरी जनयुद्धताका प्रचण्ड—बाबुरामले भारतम आश्रय लिए । अहिले के विप्लव माओवादीले पनि बंगलादेशको कुनै समुहसँग त्यस्तै खाले सम्पर्क विस्तार गरेको हो ?
काठमाडौँ । पक्राउ परेकाे डेढ महिनापछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड' मंगलबार रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको मंगलबार बसेको संयुक्त इजलासले उनलाई पुनः थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रकाण्डलाई काठमाडौंबाट उदयपुर पुर्याइयो
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) पार्टीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)लाई राजधानी काठमाडौंबाट । शनिबार उदयपुर प्रहरीमा पठाइएको छ । काठमाडौंबाट खड्गबहादुरलाई काठमाडौंका प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा बुझाएको उदयपुरका प्रहरी उपरीक्षक चन्द्रदेव राईले बताए ।
प्रकाण्डलार्इ दाङबाट पुनः काठमाडाैँ ल्याइयाे
दाङ । सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टाभित्र काठमाडौँ झिकाउन पत्र काटेपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई आज बिहान काठमाडौँ ल्याइएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पत्र काटेपछि प्रकाण्डलाई आज बिहान दाङबाट नेपालगन्ज हुँदै विमानबाट काठमाडौं ल्याइएको हो ।